Nei Uchifanira Kuisa Mu infographics Pakarepo | Martech Zone
Svondo, October 25, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Our boka yakagadzira zvinopfuura zana infographics uye, nekure, a simba sarudzo izvo zvinoramba zvichiratidza kubudirira kune wese mutengi isu takavagadzirira ivo. Isu zvino tavaitira iwo akati wandei emaasheni zvakare kuti vatambanudzire zvavo zvipo kune avo vatengi.
Mabhizinesi anoburitsa #infographics ane 12% yakakura traffic vhoriyamu. Zvinoenderana nekudzidza kwa Girafu.net
Infographics ine mabhenefiti anoenda kupfuura mazhinji ezve marongero ezvemukati:
Cognition - kana yakagadzirirwa uye ikaitwa nemazvo, infographics inopa ruzivo mune fomati iri nyore kushandisa.
Hutachiona - nekuti chingori chihombe chifananidzo, infographics inoteedzerwa zviri nyore uye inogoverwa mukati mewebhu.
kutsvaka - kana ikagovaniswa, ivo vanowanzo gadzira mareferenzi akakodzera kudzoka kumusiki, vachiwedzera masimba avo echizinda nemainjini ekutsvaga.
Kubatana neyakakura infographic agency ndiko kiyi yekubudirira kwako. Iyo infographic yakaurayiwa nemazvo inoda kutsvagiswa, kusimudzira nyaya, dhizaini, kushevedza-kuita-chiito, uye kusimudzira kuti uone zvizere kugona kwayo Iyo infographic yakaitwa zvakanaka inogona kupa mwedzi kana kunyangwe makore eakanyanya traffic kune yako saiti.
Ita shuwa kuti iyo agency ine ruzivo mune yako indasitiri. Isu takatarisa kwave kune yakanyanya tekinoroji kana kushambadzira-yakatarisana infographics. Tine mukana wakanaka watinowana wekuvaratidza pano paKushambadzira Tech blog kuti vawedzere kusvika kwavo.
Raira Infographic Nhasi!
Usatore izwi redu kwazviri, iyo infographic nyanzvi pa Neoman yakagadzirirwa uye kuvandudza iyi infographic pane nei vachishanda nemazvo. Neoman inogadzira inonakidza infographics - ive shuwa yekutarisa yavo Portfolio uye tinya nepano infographic pazasi ku tarisa iyo yekudyidzana vhezheni:
Tags: infographic agencyinfographic dhizainiInopindirana infographicsKushambadzira Infographicsneomanodha infographics
Varume neVakadzi Vanosarudza Makara Akasiyana?